uknepalnews.com | Page 8
काठमाडौं, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले कैलालीमा बलात्कार र बोक्सीको आरोपमा कुटपीट गर्नेमाथि तत्काल कडा कारवाही गर्न सरकारसमक्ष माग गरेका छन् । व्यवस्थापिका सदनमा आज बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भाषण गरेर होइन, बेथिति र विसंगतिविरुद्ध सोझै एक्सनमा जान सरकारलाई आव्हान गरेका हुन । सत्ता साझेदार पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका प्रचण्डले नेपाली जनताले बेथिति,
बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री श्रीदेवीको कार्डिएक अरेस्टका कारण दुबईमा निधन भएको बताइएको छ । नेपालमा पनि हालैका वर्षमा कार्डिएक अरेस्टको समस्या देखिने गरेको चिकित्सकहरू बताउँछन् । यसै सन्दर्भमा वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. भगवान् कोइरालासँग बीबीसीले गरेको कुराकानी हामीले प्रस्तुत गरेका छाैं । कार्डिएक अरेस्ट भनेको के हो ? कार्डिएक अरेस्ट भनेको मुटु बन्द हुनु हो
काभ्रे । गैरआवासीय नेपाली संघ रास्ट्रिय समन्वय परिषद युएईको पहल तथा डिस्कभरी रोयल स्पोर्ट्स एल।एल सी को सहयोगमा पहिलो चरण अन्तर्गत नेपालका ७ जिल्ला मध्य काभ्रेको पनौति र बनेपा नगरपालिकामा आउदो चैत ८ गते बिहिवार देखि निशुल्क प्राथमिक उपचार सम्बन्धि एक दिवसीय तालिम प्रदान गरिने भएको छ । गैरआवासिय नेपाली सघ
काठमाडौं, फागुन २६ । बढ्दो आयात मुलुकका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। दैनिक उपभोग्य सामानको बढ्दो आयातले मुलुकको आर्थिक अवस्था दिनदिनै जीर्ण हुँदै गएको छ। यस्तो संस्कृतिको विकास गर्ने काममा विप्रेषणले सहयोगी भूमिका खेल्दै आएको छ। राष्ट्र बैंकले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनले विप्रेषण आयातको २३.९ प्रतिशत घरखर्चमा जाने